काठमाण्डौमा गाडीको आवागमन सामान्य, चोक चोकमा सुरक्षाकर्मी, यस्ताे छ बन्दकाे आसर ! – List Khabar
Home / समाचार / काठमाण्डौमा गाडीको आवागमन सामान्य, चोक चोकमा सुरक्षाकर्मी, यस्ताे छ बन्दकाे आसर !
काठमाण्डौमा गाडीको आवागमन सामान्य, चोक चोकमा सुरक्षाकर्मी, यस्ताे छ बन्दकाे आसर !
admin February 16, 2022 समाचार Leaveacomment 49 Views
काठमाण्डौ उपत्यकामा अहिले सामान्य रुपमा गाडी चलिरहेका छन् । सडक र चोकचोकमा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसँगको सम्झौताको वि-रोधमा आज नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका कम्युनिष्ट पार्टी र मोर्चाले बन्द आह्वान गरेकाले सडकमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन बढाइएको हो ।
प्रहरीका अनुसार यतिबेला सामान्य तरिकाले गाडी गुडिरहेका छन् । तर, लामो दूरीमा चल्ने गाडी भने फाट्टफुट्ट मात्रै छुटेका छन् । प्रहरीले ढुक्क भए गाडी चलाउन आग्रहसमेत गरेको छ । यसैबीच, सरकारले कानुन विपरीतका गतिविधि हुन नदिन सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कता र निगरानी बढाई देशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सूचना निकालेर देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कानुन विपरीतका गतिविधि हुन नदिन सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
Previous विमानस्थलबाटै फर्काइए २७ नेपाली विद्यार्थी,दुई सय भन्दा बढी परे अलपत्र
Next बन्द गराउँदै हिँडेका विप्लव र वैद्यका कार्यकर्ता बुटवलबाट पक्राउ